Mamiriro ekunze uye ekumodhizaiza - Modelarski Świat
Category: Mamiriro ekunze emamiriro ekunze
Ngura pane silencer - maitiro ekukurumidza uye nyore kuwana zvinonakidza mhedzisiro
Maitiro ekuita ngura pane iyo isina kugadzikana - iyi ndeimwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa nezve modhi yekunze nemafeni e "armor". Nhasi, zvakare, Mirosław Serba agovana ruzivo rwake nesu, achiratidza maitiro ake. Muchidimbu gwara, iye anotsanangura uye kuratidza maitiro aunogona nekukurumidza uye nyore kuwana zvinonakidza mhedzisiro pamuenzaniso.
Yakasviba tank tub & yakaderera mota zvikamu nhanho nhanho
Munyori wedhairekitori yanhasi munhu anozivikanwa zvakanyanya pachiitiko chePoland modelling - Mirosław Serba. Iye achatiratidza nzira yake yekunyatso kupedzisa iwo ezasi zvikamu zvemotokari mune mashoma mashoma matanho. Kugadzirira kusvibisa modhi - zvishandiso Kugadzira iyo yakasviba iwe yauchazoda: hay ivhu, pigments, (mavara anoshandiswa pano): https://sklep.modelarskiswiat.pl/pl/p/A.MIG-3007-DARK-EARTH/ 125119 https: //sklep.modelarskiswiat.pl/pl/p/A.MIG-3004-EUROPE-EARTH/125116 https://sklep.modelarskiswiat.pl/pl/p/A.MIG-3003-NORTH-AFRICA- DUTU / 125115 pendi yemafuta (van Dycke shava ruvara), ...
Maitiro ekugadzira upholstery pane modhi - Sponge upholstery michina - yakapusa uye inoshanda!
Iyo pendi inokwenya pamuenzaniso inotaridzika chaizvo, inowanzoitwa pamotokari dzemauto nendege, ichivapa nzara uye kucheka chaiko. Chero michina inonyatso shandiswa mumamiriro akaoma, kunyanya emauto, anoratidza zviratidzo zvekusakara uye misodzi, uye inounganidza madhende, abrasions uye kukwenya panenge pamatanho ese. Izvi zvakakosha kuratidza izvi pane yemuenzaniso. Mune ino chinyorwa, ini ndinopa maitiro ekugadzira upholstery pa ...
Wash mafuta - maitiro ekugadzira - maitiro ekuteedzera emhando yepamusoro
Wash pamuenzaniso Wash isu tinoverenga moose) akafanana nemakeapu pamukadzi. Inosimbisa runako uye neimwe nzira zviri nani zvirinani pane pasina 😉 Izvo zvakanyanyisa wash mukuteedzera, ndiyo yekutanga yesarudzo uye maitiro ekutanga, kwandiri, mhando dzese dzemotokari, ndege kana mumwe muchina wekurwa.
Kuisa pigments kune mamodheru - kuunganidzwa kweruzivo
Muchikamu chakapfuura, ndakaratidza kuti pigment inogona kuitwa sei nekukwiza vafudzi uye ini ndakapa maonero angu pamusiyano uripo pakati peupfu hwakatengwa uye hupfu. Ino nguva, ini ndichaisa pigments pane iyo Wallpaper uye mhedzisiro yatinowana. Kana iwe wakanamatira uye kupenda iyo modhi, kunyangwe nekutarisira kwakanyanya, mune ino mamiriro inongotaridza senge toyi yakagadzirwa zvakanaka, ...